ट्रांजिन्डलेंट मेटिटिटी® टेक्निकल: आईटी प्रोफाईलका लागि प्रतियोगी एज - एमआईएममा कम्प्यूटर प्रोफेशनल कार्यक्रम
अप्रिल 10, 2012 /in ब्लग /by Compro
महाराष्ट्र विश्वविद्यालय प्रबंधन कम्प्यूटर साइंस डीन ग्रेगरी गर्थरी को अनुसार, "अमेरिकामा आईटी शिक्षाको भविष्यमा सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूलाई सुधार गरेर सफ्टवेयर सुधार गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दछ। "
एमआईएम शिक्षाको विशिष्ट भिन्नता भनेको हो कि सबै विद्यार्थी र संकायले उनीहरूको बुद्धि, रचनात्मकता, समस्या समाधान गर्न क्षमताहरू र सामान्य भलाइको विकासको लागि एक सिद्ध प्रविधिलाई अभ्यास गर्दछ। यो प्रविधि, लगभग 700 वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा प्रमाणित छ, र दुनिया भर सबै प्रमुख संस्कृति र धर्म देखि6मिलियन मान्छे द्वारा अभ्यास ट्रांजिन्डलेंट ध्यानन तकनीक.
"व्यक्तिगत विकास पेशेवर सफलताको लागि कुञ्जी हो"कम्प्यूटर विज्ञान को क्षेत्र मा विद्यार्थीहरु को लागि यस अवसर प्रदान गर्न को लागि डा गौथ्री," र एम्यू अद्वितीय छ, उनको प्रौद्योगिकी र अकादमिक प्रशिक्षण को बढावा दिन को लागि। "
सबै पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरू TM।
दैनिक अभ्यासको कार्यले काम र जीवनबाट तनावलाई मेटाउँछ, शारीरिक रूपले मलाई मेरो काममा थप चुनौतीहरू लिन सक्षम बनाउँछ, र मेरो कम्पनीमा एक अर्कालाई थप माइलमा जानुहोस्। - केआई (चीन)
मेरो लागि टीएम अभ्यास गर्ने लाभ मध्ये एक शांत र नियन्त्रणमा रहेको छ। नियमित अभ्यास गर्नाले तपाइँले मात्र यो काम गर्नु भन्दा बढी पैसा दिन्छ जब तपाईलाई सोच्नुहुन्छ तपाईलाई यसको आवश्यकता छ। यो एक द्वारा एक तनाव को तह बन्द र एक गहिरो आत्म अनुभव गर्न प्रक्रिया हो। म पहिले भन्दा छिटो जान्न सक्षम छु, दिनको समयमा अझ राम्रो ध्यान दिनुहोस्, र रातमा पर्याप्त सुत्न पाउनुहोस्।
मेरो प्रबन्धक मेरो प्रगतिसँग धेरै आनन्दित छ र मैले के गरिरहेको छु। उनले तथ्यलाई मनपर्थ्यो कि म स्वस्थ खाएर, मेरो हेरचाह गर्छु, सुत्न सक्दिन र मनन गर्दछु। - एसएम (ईरान)
TM को दैनिक अभ्यास सधै व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा उपयोगी भएको छ। यसले मलाई अलर्ट र ठोस राख्छ। - एसएम (नेपाल)
TM प्रविधिको मेरो अभ्यासले मलाई मेरो काममा राम्रो फोकस र दिनको जीवनमा कम तनावपूर्ण दिन मद्दत गरेको छ। - एए (ईथियोपिया)
म काममा र मेरो DE पाठ्यक्रममा बिताउने समयको साथ, म बिना TM लाई बाँच्न सकेन। मैले देखेको छु कि म दिनको अन्तमा थोरै थियौं र थकित छु, तर चाँडै म मनन गर्छु, म पुनर्जन्च गर्दछु। - ई.टी. (क्यानाडा)
नियमित TM अभ्यासले मलाई कठिनाइको समयमा ताजा र शान्त रहन मद्दत गरेको छ। मलाई लाग्थ्यो कि म सहकर्मीहरूको तुलनामा सामान्य तरिकामा दबाब देखाउँदै छु, र यो निश्चित रूपमा नियमित टीएम अभ्यासको परिणाम हो। - एलपी (नेपाल)
मैले टीएमको कारण हालै धेरै धेरै सम्भावनालाई सम्भाल्न सक्षम बनाएको छु र धेरै सजिलै संग मल्टीट्यास्क गर्न सक्षम छु। - डीपी (भारत)
TM को साथमा अधिक विस्तार र समस्याहरूको अझ अधिक गहन दृष्टिकोण अनुभव गर्दछ, नयाँ प्रविधिहरू सिक्न सजिलो, सजिलै ध्यान केन्द्रित र सन्दर्भ स्विचन। - एसएम (बुल्गारिया)
जब देखि केहि थोडा तनावपूर्ण छ, खासकर जब समय सीमा आउँछ, टीएम यो आसान बनािन्छ। - एसएम (ईथियोपिया)
ट्रांस्जिन्टमेन्ट मेटिमेन्टले मलाई शान्त र शान्त पार्दछ जसले मेरो जीवनको यो अनिश्चित समयमा तनाव कम गर्न सहयोग गर्दछ। - DR (फिलिपिन्स)
TM ले मलाई मेरो कर्तव्यहरूमाथि कुनै पनि बाह्य रसायनहरू जस्ता गोलहरू वा कफीको प्रयोग नगर्न मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ, र यसले मेरो शरीरको काम र गतिविधिको लामो दिन पछि ताजा बनाउँछ। - VA (कोलम्बिया)
मेरो वर्तमान पाठ्यक्रम एक कठिन छ, धेरै समय र ध्यान चाहिन्छ। टीएम अभ्यास स्वाभाविक रूपमा तनाव रहिरहन्छ, र एकै समयमा सहज हुँदा मलाई ध्यान दिन मद्दत गर्दछ। - एसवी (श्रीलंका)
मेरो दिमाग स्पष्ट छ, मेरो शरीर आराम हुन्छ। टीएमले मलाई तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ। TM को अभ्यास काम मा र मेरो व्यक्तिगत दैनिक गतिविधिहरुमा मेरो प्रदर्शन को बढावा दिदै छ। - ला (डोमिनिकन गणराज्य)
ट्रान्जिन्डन्टिकल ध्यान प्रविधिको अभ्यासमा मैले आफैलाई बुझ्न आएको छु, र कसरी मेरो विचार र अनुभवहरूले मेरो रोजगारीको जीवनलाई असर गर्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो संचार कौशल र मेरो लक्ष्यमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमतामा सुधार गरेको छु। - GA (घाना)
TM को नियमित अभ्यासले सफ्टवेयरको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण सोचलाई उत्पादन गर्छ। टीएमले मलाई तनाव जारी गर्न मद्दत गर्दछ र मलाई दिनको ताजा दिमाग संग मेरो काम सुरु गर्न अनुमति दिन्छ। - एसए (श्रीलंका)
जब धेरै तनाव र कार्यभार छ जब मैले जटिल समस्या समाधान गर्न गरेको अनुभव लगभग असम्भव छ। ट्रान्जिन्डन्टिन मेटिटिमेन्टले मलाई यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्दछ। म काम गर्न जाने अघि बिहान मनन गर्नुहोला, र फेरि घर फर्कने पछि। केवल 20 मिनेटको TM पुनः फेरि बिहानको तातोपानीमा ल्याउँछ। - एए (नेपाल)
नियमित टीएम अभ्यासले कम्प्यूटर प्रोफेसरहरूलाई आफ्नो जीवनमा सफल बनाइदिन्छ र थप क्रमशः दिमागहरू पुन: सक्षम पार्छ।
टीएम प्रविधि एम विद्यार्थीबाट सबै विद्यार्थीहरूलाई उपहार हो। TM तपाईंलाई कम तनाव संग रहन मद्दत गर्नेछ। - टीए (म्यांमार)
टैग: ट्रांजिन्डलेंट ध्यानन तकनीक
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2012_04-01.jpg 284 462 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2012-04-10 21:18:102019-05-31 10:57:01ट्रांजिन्डलेंट ध्यानन तकनीक: आईटी प्रोफाईलका लागि प्रतियोगी किनारा